nekapa « Nagarik Khabar
माओवादी प्रदेश-१ अधिवेशन : ९ जना पदाधिकारीका लागि २९ जनाको उम्मेद्वारी
विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश- १ कमिटीको ९ जना पदाधिकारीका लागि २९ जनाको उमेदवारी परेको छ । उद्घाटन भएको १२ दिनमा हुन गइरहेको चुनावमा केन्द्रका दुई नेता निकाटका प्रदेशका
विधान महाधिवेशनको दस्तावेजका लागि एमालेले छलफल गर्दै
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजका विषयमा आज अनौपचारिक छलफल गर्दै छ । शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेजका विषयमा छलफल हुने
ओलीको यस्ताे लचकता पनि किन लत्याइरहेछन् नेपाल ?
काठमाडौं । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिर्दा समेत नेकपा एमालेमा रहेको आन्तरिक विवाद समाधानको दिशा तिर गएको छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को लगातार तेस्रो दिन जारी बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले दलीय प्रणाली खल्बल्याएका भन्दै जनतामा जाने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टीले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई खल्बल्याएको भन्दै
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले विदेश भ्रमण प्रवेशाज्ञामा ४० वर्ष मुनिका महिलाका लागि स्थानीय तह र परिवारको सहमति चाहिनेबारे सरकारले कुनै निर्णय नगरेको प्रष्ट पारेकी छन्
रिहा भएपछि झाँक्रीले भनिन्, ‘चर्को दवावले ओली सरकार मलाई छाड्न बाध्य भयो’
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले चौतर्फी दवावका कारण सरकार आफूलाई रिहा गर्न बाध्य भएको बताएकी छन् । अपराध महाशाखाबाट रिहा भएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै झाँक्रीले यस्तो
रिहा भइन् रामकुमारी झाँक्री !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री रिहा भएकी छन् । अपराध महाशाखाबाट आज बिहान पक्राउ परेकी झाँक्री रिहा भएकी हुन् । राष्ट्रपतिविरुद्ध अमर्यादित र नैतिक आँच आउने
झाँक्रीको समर्थनमा प्रचण्ड-माधव समूहका युवा/विद्यार्थीको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा युवा, विद्यार्थीले काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । नेतृ झाँक्रीलाई बिनाशर्त रिहा गर्न माग गर्दै अनेरास्ववियू र
सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छताका लागि नियमन, अनुगमन हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजकल्याण परिषद् र विश्वविद्यालयहरु बीच परियोजना मूल्याङ्कनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नयाँ अभ्यासको प्रारम्भ भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परिषद् र विभिन्न विश्वविद्यालयबीच परियोजना
झाँक्रीको गिरफ्तारीले राज्यको चरित्र उदांगो, नि:शर्त रिहा गर्न प्रचण्ड-माधव समूहको माग
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहको नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको गिरफ्तारी लोकतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप भएको नेकपाले जनाएको छ । नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै झाँक्रीको गिरफ्तारीले राज्यको घोर